ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမည် | He Shall Glorify Me| Real Conversion
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်တွင် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁၇) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော Dr. R. L. Hymers, Jr.
Dr. Martyn Lloyd-Jones သည် နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီးအလေးအနက်ထားသော သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။သူသည် နိူးထမှုဆိုင်ရာသမိုင်းကိုလေ့လာသူဖြစ်ပြီး၁၉၃၁ ခုနှစ်မှဝေးလ် နိူင်ငံရှိသူ.အသင်းတော်မှာလည်းအတွေ.အကြုံရှိသုဖြစ်သည်။ဧဝံဂေလိဆရာကြီး Howell Harris (1714-1773) ရဲ.သွင်သင်မှုဖြစ်သော”ကျွနုပ်တို.သည် ကနဦးခုနှစ် ၁၈ ရာစုကဲ.သို.သောအသက်မပါအမှောင်ထုအခြေနေကိုဆန့်ကြင်သောသူများဖြစ်ကြောင်းသွင်သင်ခဲ.သည်။” (D. M. Lloyd-Jones, ဘာသာရေးကျင်.ကြံသူများ၏အောင်မြင်သောသူများနှင်.သူတို့မှူလ,ကိုးစားရာဓမ္မာတရားစာတမ်း,၁၉၉၆ထုတ်လုပ်မှု,စာမျက်နှာ ၃၀၂).Dr. Lloyd-Jones ကအသင်းတော်မှာကျင်.ကြံနေတဲ.မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်နောက်ဆုံးပိုင်းအချက် တစ်ရာကိုလည်းအခြားစာအုပ်တွင်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။[ယနေ့၁၅၀ ခုနှစ်]ခုနှစ် (Revival, Crossway Books, 1987, page 55).
ကျွန်ုပ်တို.အသင်းတော်များ၏တန်ကိုးနှင့်အသက်သာအကျပိုင်းကိုကျွန်တော့်ရဲ့ ၅၅နှစ်သာကါလသာသနာလုပ်ငန်းတွင်တွေ.ကြုံခဲ့ပါသည်။ယနေ့အသင်းတော်များမှာအရေးကြီးကဏ္ဍတွင်ကျွန်တော့အသင်းတော်လူငယ်များနဲ့တူပြီးပြောင်းလဲမှုကတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ကါဘူး။အမှန်စဉ်စစ်ကျွန်ုပ်တို.ဟာအသက်မယ့်တဲ့အမှောင်ထုအခြေနေကို တွန်းလှန်ကြရတယ်။တကယ်တော.ကျွန်ုပ်တို့ဟာမှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်ထဲမှာရှိကြတယ်။ ဒီလိုပဲအလွန်းဆိုးရွားသောအခြေနေတွေကြယ်ပြန်.စွာဖြစ်ပေါလာတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်မာယုံကြည်တယ်။အကြောင်းကတော့သင်းအုပ်ဆရာတွေကလူတစ်ဦးကိုဘယ်အရာကခရစ်ယာန်ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာမေ့နေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံထဲ မှာအသစ်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျကျသိသောတရားဟော ဆရာများအလွန်နည်းပါးနေတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောခြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုးထမှုအကြောင်းဟောပြောသောသူများက ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေ နိုးထစေဖို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လိုအပ်မှန်းသိကြပေမယ့်အနည်းသယ်များကသာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကောင်းစွာနားလည်ကြတာပါ။နက်နဲလှတဲ့ပြဿနာကြီးကြုံတွေ့နေရမှန်းမသိကြသောကြောင့် လိုအပ်နေတဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမသိကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လူတွေလည်းကယ်တင်ရကြတယ်ထင်ပြီးလူသစ်တွေကိုလည်းဘယ်လိုခေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ကြတယ်ထင်နေကြပါတယ်။ ပြည်.စုံကြွင်းကျင်သောဆရာများအကြောင်းကိုတော့ မပြောလိုဘူး။အသင်းတော်များမှာမယုံကြည်သူများနှင့်ကျယ်
ပြောတတ်တဲ့အသင်းသူသင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်။ထိုပြဿနာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာလေး လေးနက်နက်ရေးသားထားပါတယ်။ (Today’s Apostasy) ဒီညမှာနိုးထမှုနှင့်ပတ်သက်သောအထွေထွေပြဿနာအကြောင်းကိုဟောပြောချင် တာမဟုတ်ပါဘူး။နိုးထမှုဖြစ်လာစေဖို့ဘုရားသခင်ထံဆုသင့်တယ်လို့အဓိကပြောခြင်တာဖြစ်တယ်။နိုးထမှုဆိုင်ရာစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ခံစားချက်ကအသင်းတော်ကိုနိုးထစေခြင်တာဖြစ်မှာပဲ။အသင်းသူသင်းသားများထဲကအနည်းစုကိုတော့ပြောင်းလဲပြီးနိုးထစေ
ခြင်မှာသေခြာတယ်။ထိုသို့နိုးထမှုဖြစ်မလာတဲ့ချိန်မှာမျော်လင့်ချက်မယ့်နေတတ်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရမှာကစစ်မှန်တဲ့ပြောင်လဲခြင်းဆိုတာနိမိလက္ခဏပဲဖြစ်တယ်။ မျော်လင့်တကြီးနဲပြောင်းလဲသောသူတွေကို Dr. Cagan နှင့်စရင်းပြုတဲချိန်မှာလစဉ်တိုင်းလိုလိုထိုသို့ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိရတယ်။ထိုအရာကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုံးက
မားတဲ့တန်းခိုးနဲ့ဆင်းတက်လာဖို့ဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အဓိကပတ်တက်မှုဖြစ်လိပိ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ထိုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အရာတွေကိုလူတော်တော်များ များကငြင်းပယ်ကြလိပ်မယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုင်ရာမှားယွင်းသောသွင်သင်မှုတွေအများကြီး၂ဝရာစုအတွင်းမှာရှိခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ကိုအ ပြစ်မတင်ရဲဘူး။ ဒါပေမယ့်နိုးထမှုကြီးကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမှာလည်း
သားများကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အခြားသောဘာသာစကားပြောစေတယ် သို့မဟုတ် ငွေအများကြီးရဖို့တတ်နိုင်တယ် သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေတယ်လို့ထင် ကြတယ်။ဒါပေမယ့် ထိုအရာတွေကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းထဲမှာမပါ
ဘူး။ ရှင်ယောဟန် ၁၆း၁၄ ထဲမှာဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကိုတွေ့ရ တယ်။ ယေရှုကဤသို့ဆိုထားပါသည်။
”ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေသောသူဖြစ်သည်” (ယောဟန် ၁၆း၁၄)
ဂရိဘာသာမှ“ဘုန်းတော်ထင်ရှားသည်”ဘာသညပြန်တဲ့အခါ်လေးစားသည်၊မြတ်နိုးလေးစားသည်၊ချီးကျူးသည်၊ချီးမွမ်းသညဟုအဓီပါယ်ရပ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်း က ခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့၊ခရစ်တော်ကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိဖို့၊ ခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်ပင်ဖြစ်သည်။
လူတို့တွင် မှားယွင်းသောစကားကိုပြောဆိုကြသောအခါတွင် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကို ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ Dr. Cagan က ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်ဖြစ်သည် “ယနေ့ မှားယွင်းသောဩဝါဒများ” စာအုပ်တွင် ညွှန်းဆိုထားပါသည်။
ရိုမင်ကစ်သိုလစ်နောက်ခံရှိသောလူများကကယ်တင်ခြင်းဟူသောစကားလုံးကိုအပြစ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းသွားခြင်း၊ ယေရှုနောက်တော်သို့ လိုက်လျှောက်ခြင်း၊ ယေရှုကိုချစ်ခြင်း၊ အပြစ်ဝန်ခံခြင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် “ကောင်းမြတ်ခြင်း”စသဖြင့်သောအလုပ်အားဖြင့်ဟုထင်မှတ်ထားကြပေသည်။
နှစ်ခြင်း၊ဧဝံဂေလိနှင့်ပြုပြင်နောက်ခံရှိသောသူများက “အပြစ်သား၏ဆုတောင် ချက်”သို့မဟုတ် “ ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်”သို့မဟုတ် “Westminster Catechism” ကိုရွက်ဆိုခြင်းကဲ့သို့သောခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက် များကိုပြောဆိုလျက် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကိုအားကိုးကြသည်။ ခါရိရှ်မက်တစ်
သို့မဟုတ်ပင်တေ့ကိုစတယ် နောက်ခံရှိသောသူများကအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစား ချက်များကိုအမြဲတမ်းတွေးတောကြပါသည်။လူတစ်ယောက်သည် သူစဉ်းစား ခြင်ဆင်သောအရာသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဖြစ်သည်ဟူသည်က အသက်တာတွင်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားသည်၊သို့တည်း မဟုတ် စိတ်နှလုံးထဲတွင်ငြိမ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ် ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရသည် ဟူသောအရာဖြင့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရရှိလျှင် မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်ဟုထင်မှတ်ပေသည်။
လူများစွာတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိဘူး သောအခါ ထိုသို့သောအခြေအနေဖြင့် အကြံဥာဏ်တောင်းခြင်း၊ စိတ်ချမှုကိုရှာဖွေခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားသောခံစားချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိလာကြသည်။ (Today’s Apostasy, Hearthstone Publishing, ၂၀၀၁၊ စာမျက်နှာ ၁၄၁ )
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိသောနည်းလမ်းရှိပေသည်။ သူတို့ ပြောင်းလဲသောနေ့ရက်ကိုသင်းအုပ်ကမေးမြန်းသောအခါ အရင်ကသူတို့ကြားခဲ့ဖူးသောတရားဒေသနာကိုပေးလျက်“မဟုတ်မမှန်ပုံဝထ္ထု” ဖြင့်သာစတင်
ပြောဆိုကြပါသည်။ထို့အပြင် အချို့ကသူတို့အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းခံစားချက်ကိုလည်းထည့် သွင်းပြောဆိုခဲ့ကြ သည်။ သူတို့ကပြောင်းလဲခြင်းသို့ဦးဆောင်သည်ဟုဆိုကြသည် ပုံပြင်ကိုသာပြောဆိုလေ့ရှိ ကြသည်။ သို့ဖြင့် သူတို့က “ ကျွန်ုပ်ယေရှုကိုကိုးစားသည်၊” သို့မဟုတ်“ကျွန်ုပ်ယေရှုထံပါးသို့လာပါသည်”ဟူသောစကားဖြင့် အဆုံးသတ်လေ့ရှိကြသည်။
ထို့နောက် သူတို့အားယေရှုအကြောင်းအနည်းအကျဉ်းနှင့် ယေရှုထံသို့လာသည့်အခါ တွေ့ကြုံရသည့်အဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုပြောပြရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့မှသာအရာအားလုံးသည်မုသာမှန်းသိသာလာသည်။ ယေရှုအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ လျှင်ပင် သူတို့မပြောနိူင်ပေ။ Spurgeon က သူ၏ Around the Wicket Gate စာအုပ်တွင် “ဧဝံဂေလိတရားထဲမှယေရှုကိုပထုတ်ရန်လူတို့ကြားတွင် လုပ်ဆောင်မှုရှိသည်”ဟုဆိုထားပါ သည်။ ( Pilgrim Publications, ၁၉၉၂၊ စာ ၂၄ ) ဧဝံဂေလိတရားကို ဆက်လက်၍ လာရောက်နားထောင်စေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏သက်သေခံချက်တွင် ယေရှုသည်အချက်အခြာဖြစ်ကြောင်းကိုသိစေလိုသည်။ခရစ်တော်သည် အချက်အခြာ;မ
ဟုတ်ခဲ့လျှင် လူတစ်ဦး၏သက်သေခံချက်သည် မည်မျှပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါ စေကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေးပေ။ စစ်မှန်သောပြောင်းလဲမှုတိုင်းတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အဓိကအရာနှစ်ခု ကိုဆောင်ရွက်သည်။ ပထမအချက်သည် ယောဟန် ၁၆း ၈-၉ တွင်တွေ့ရသည်။
“ဥပဇ္စျာယ်ဆရာရောက်လာလျှင်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်း၊ အပြစ်ကင်းခြင်းကို ၎င်း၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်း၊ လောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်။ ငါ့ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဘော်ပြမည်။” ( ယောဟန် ၁၆း ၈-၉ )
အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပထမအလုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် စကားအနည်းငယ်ကိုတိုးတိုးလေးပြောဆိုခြင်း၊ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကိုပြောဆိုရန် သင်ယူခြင်းဖြင့် ရရှိနိူင်သည့် မပြောပလောက်သောအရာ၊ သေးငယ်သောအရာပြောဆိုရန် အားရုံစူးစိုက်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကူမတော်မူပါ။ ဝိညာဉ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ချန်လှစ်မိပါ၏။ ကျွန်ပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နက်နဲစွာတည်နေသောအပြစ်နှင့် ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သော အပြစ်နှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားသိစေရမည့်အရာကိုမေ့လျော့လျက်ရှိကြပါသည်။ Dr. Lloyd-Jones ကအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းသည် သင့်နှလုံးသားအပေါ်ကျရောက်သောကပ်ဆိုး နှင့် အာဒံထံမှဆက်လက်အမွေခံရရှိသောအပြစ်ရှိခြင်းသဘာဝကိုရှုမြင်ခြင်းကဲ့သို့ဖော်ပြထား ပါသည်။ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းကသန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ပြီးအပြစ်ကိုရွံ့မုန်းသောဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင် သင်၏မျှော်လင့်မဲ့ခြင်းနှင့် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာများထင်ရှားခြင်းကိုသိမြင် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ( နိူးထမှု၊ ကားတိုင်လမ်းစာအုပ်၊ ၁၉၈၇၊ စာ-၄၂) အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသောသူတို့၏အသက်တာတွင် ထိုသို့သောအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ Dr. Lloyd-Jones က “ နိူးထပြီးအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းခံရသောသူသည် ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်ပြီးဒုက္ခကြုံတွေ့ရမည်။ သူသည် သေပြီးဘုရားသခင်ကိုဖူးတွေ့နိူင်မည်နည်း။” (သေချာမှု၊ ရောမ ၅၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၇၁၊ စာမျက်နှာ ၁၈)
ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာမှာစစ်မှန်သောပြောင်းလဲသောသူများအသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် လူတို့ကို နှောက်ယှက်ပါသည်။ သင့်အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောသဘောသဘာဝက သင့်ကိုနက်နက်နဲနဲနှောက်ယှက်ခြင်းမရှိပါမူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုများစွာတွေးတော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံသည်ဟူသောစကားကို ကြားသိရပေမည်။ သို့သော် သင့်အားအနည်းငယ်သာသိစေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ သင်သည် အပြစ်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ များစွာသိစေခြင်းမရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။( ယော ၁၆း ၈ ) “အပြစ်သားတစ်
ယောက်သည်အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းတစ်ခုတည်း၌သာရှိနေမည်မဟုတ်၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်: တစ်ခုကကယ်တင်မည်မဟုတ်ပါ။”ရက်ပေါင်းများစွာအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းကိုသိရှိခံစားနေရသောလူငယ်တစ်ဦးနှင့်စကားပြောဖြစ်ပါသည်။ သူ့အားအသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန်အတွက် ခရစ်တော်ထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရန် ပြောပြခဲ့ပါသည်။ သူသည် ထိုသို့လုပ် ဆောင်လိုဟန်ရှိသည်။ခရစ်တော်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုဟန်ရှိပေသည်။ ရက်သတ္တပတ်အ နည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်မည်သို့ပြောင်းလဲလာသည်ကိုပြောပြရန်သူ့အားမေးတော်မူခဲ့သည်။သူ့အပြစ်အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ထပ်ခါထပ်ခါပြောခဲ့သည်။ အပြစ်ကိုနက်နက်ရှိုင်း
ရှိုင်းဖော်ပြခြင်းမှ တပါးအခြားမေးခွန်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးတွင် “ ကျွန်ုပ်ယေရှုထံသို့လာသည်” ဟုဆိုခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ခရစ်တော်အကြောင်းအနည်းငယ်မျှပြောပြရန် သူ့အားတောင်းဆိုခဲ့ သည်။ သူသည် ပတ်ပတ်လည်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးကယ်တင်ရှင်နှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် အသက်တာတွင် အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းမှလွဲ၍ ငြိမ်သက်ခြင်းမရရှိသေး
ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ လူတို့ကအကျွန်ုပ်အားမကြာခဏမေးလေ့မေးထရှိသောအရာမှာ “ခရစ်တော်ထံသို့ မည်သို့ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပါသနည်း” ဟူ၍ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမေးခွန်းကိုဖြေကြားဖို့ရန်အတွက် ယောဟန် ၆း ၄၄ ကိုကြည့်ရှုရပေမည်။
“ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည် သွေးဆောင်မမူလျှင် အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံသို့မလာနိူင်။” ( ယောဟန် ၆း ၄၄)
သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခမည်းတော်ကခရစ်တော်ထံသို့ သာ၍နီးစေတော်မူသည်။ ယေဘုယျသဘောဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် တော်သည်သာလျှင်အပြစ်သားများအားအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ သနားခြင်းအတွက်ခေါ်ခြင်းခံရ သောအခါသာ၍နီးစေတော်မူသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူတစ်ဦးအားခရစ် တော်ထံပါးသို့ခေါ်ဆောင်သောအခါ သူတို့၏စက္ခုအရုံသည် ယခင်ကမှောင်အတိရှိဟန် တူသည်။ သို့သော် ယခုတွင်မူသူတို့မျက်စိသည် အလင်းကိုရပြီးသူတို့ကိုပွေ့ဖက်ချီရန် လက်ကိုမြှောက်လျက် လှပသောမျက်လွှာအစုံဖြင့် ကယ်တင်ရှင်ကို မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါပြီ။ သူတို့သည် John Newton နှင့်အတူချီမွမ်းခွင့်ရခဲ့ကြလေပြီ။( ၁၇၂၅-၁၈၀၇)
သို့ဖြစ်၍ နိူးထမှုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေ လိစကားလုံးတွင် တွေးတောဆင်ခြင်ကြရမည်။ နိူးထမှုဟူသည်မှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကလူတို့အပြစ်အတွက်ခံစားစေခြင်းနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ခေါ်သွင်းခြင်းမှတပါးအခြားအရာမရှိပေ။ လူတစ်ဦးအသက်တာတွင် ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်က ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင်ဖြစ်ပျက်သည့်အလားတူစွာဖြစ် လာသောအခါ ၎င်းမှာပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၏အံ့ဘွယ် နိမိတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ် သည်။ John W. Peterson က သူ၏တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်တွင် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါ သည်။
(John W. Peterson, ၁၉၂၁-၂၀၀၆ ရေးစပ်သည့် ( အံ့ဘွယ်လိုပေ)
ထို့အပြင် ထိုအံ့ဘွယ်အရာသည် လူများစွာသောအသက်တာတွင် တစ်ကြိမ်တည်း၌ ဖြစ်လာသောအခါ အသင်းတော်တွင် လူ ၁၀ ဦးသို့မဟုတ် ၁၂ ဦးအား ၎င်းသည် နိူးထမှုဖြစ် ကြောင်းပြေပြလိုက်ပါ။ ထိုမျှပင် ရိုးစင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးပြောင်းလဲသောအ ခါတွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာသည် လူအများပြောင်းလဲသည် တခဏတာအချိန်တွင်လည်းဖြစ် ပျက်လျက်ရှိပေသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နိူးထမှုရှိသောအချိန်ကာလတွင် ဆင်းသက်ပြီးပြောင်းလဲလာသောသူများစွာတို့၏အသက်တာတွင် ခရစ်တော်၏ဘုန်းကိုထင် ရှားစေပါသည်။
Dr. Lloyd-Jones ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါ နားထောင်ကြပါစို့။
ရှိသမျှသောအရာအားလုံးထက်နိူးထမှုသည် ဘုရားသခင်၏သား တော်ယေရှုခရစ်ကိုဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအသင်း တော်၏ဘဝအသက်တာ၏အချုပ်အချာတွင် သူအားပေးခြင်းသာဖြစ်ပေ သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် သူ့အားချီးမြှောက်ခြင်း၊ သူ့အတွက် အသက်ရှင်ခြင်း၊ သူကိုသက်သေခံရန်အသက်ရှင်ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ် တိုင်၌သူ၏အသေခံခြင်း၊ သူ၏ချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်၊ သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ထက်တန်ဖိုးရှိသောအရာမရှိပေ။ သင့်ကိုယ် သင်စစ် ဆေးနိူင်သောကိုးကားမှုတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်ပြုလိုပေသည်။ သင်က နိူးထမှုတိုင်းတွင် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အပေါ်တွင် ထူးခြားသောအ လေးထားမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိပေမည်။ နိူးထမှုတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အမြဲဆို လေ့ ရှိသောတေးသီချင်းမှာအသွေးတော်အကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် ဧဝံဂေလိတရား၏အနှစ်သာရမှာ “ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသွေးတော်၌ ရန်ငြိမ်းခြင်းအမှုကို ပြုသောသူ” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ (ရောမ ၃း ၂၅) လူတစ်ဦးသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်အသွေးတော်ကိုငြင်းဆန်လျှင် နိူးထမှုကိုရရှိရန်မဖြစ်နိူင်ပေ။ ( နိူးထမှု၊ ထပ်၍၊ စာ- ၄၇၊၄၈၊၄၉ )
(William Cowper, ၁၇၃၁-၁၈၀၀ ရေးစပ်သည် “သွေးတော်နှင့်ပြည့် သောစမ်း” )
(Dr. Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ရေးစပ်သည့် “အံ့ဘွယ်လက်ဝါးကပ် တိုင်တော် ”)
မှားယွင်းမှုရှိသောနေရာတွင် ခါရိရှ်မက်သစ်နှင့် ပင်္တေ့ကော်စတယ်များမှားယွင်းရာနေ ရာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုရမည်ဟုခံစားလာပေသည်။ သူတို့ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိုအဓိကအလေးထားပြောဆိုကြပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံသောယေရှု ၏အသေခံခြင်းသည် အဓိကအရာမဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် အနာငြိမ်းခြင်း၊ ဝိညာဉ်လဲခြင်း၊ နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်ရာများတွင ္လွန်စွာစိတ်လှုပ်ရှားကြပေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြောဆို ချက်အပေါ်သူတို့မည်သို့ပင် ပြန်လည်ချေပပါစေ၊ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည့် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်တွင်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားအသေခံခြင်းကိုအဓိကအလေးထားခြင်းမပြုကြပေ။ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့သည် အခရာ ကျသောအရာများမဟုတ်ကြပေ။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ် ဧဝံဂေလိနှင့် ဖန်တမင်တဲယ်အသင်း တော်များသည်လည်းကောင်းကွက်မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းတော်များ၌ခရစ်ယာန် များဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်ကြသည့် ပျောက်ဆုံးလူများအားတစ်ပိုဒ်ချင်းစီကျမ်းစာသွန်သင် ခြင်းတွင် အလုပ်ရှုပ်နေကြပေသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှားယွင်းသောအရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဧဝံဂေလိတရား၏အချုပ်အချာမှာယေရှုခရစ်နှင့် ၎င်း၏အ သေခံ ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အကြီးမားဆုံးတရားဟောဆရာကြီးကဤသို့ဆိုထာပါသည်။
“ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံတော်မူသော သခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့တွင်ငါမသိ” (၁ကော ၂း၂)
မိန်းမ၊ယောက်ျားတိုင်းသည် “ယေရှုထံသို့ကျွန်ုပ်လာသည်” ပြောရုံတမယ်ဖြင့် နိူးထ မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ကူမတော်မူပါ။ သင့်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ဒုက္ခပေါင်း များစွာကိုကြုံတွေ့ခံစားသောဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ် ထိုအရာသာပြောနိူင်ခဲလျှင် သင် သည် ယေဟောဝါသက်သေများ သို့မဟုတ် မွတ်စလင်များကဲ့သို့ပင် အလင်းမမြင်နိူင်သေး သူဖြစ် မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။ သူတို့လည်းပဲယေရှုအကြောင်းကိုပြောဆိုကြသည်။ အသွေးတော်ကားအဘယ်မှာနည်း။ ဒုက္ခဝေဒနာခံပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံရန် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာစေသော အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာကားအဘယ်နည်း။
တခါတရံနင့်ကိုငါကျဆုံးစေသည်ဟုထင်မိသည်။ကျွန်ုပ်ကယေရှုကိုအရမ်းချစ် တော်မူ သည့်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောဆိုရန်သွန်သင်နေခဲ့သည်မဟုတ်။ ယေရှုကိုသင်ချစ်ရန် လည်းမစွမ်းဆောင်ပေးနိူင်ပါ။အောက်ပါအတိုင်းအမှန်တကယ်ပြောဆိုနိူင်ရန် လည်းမလုပ် ဆောင်နိူင်ပါ။
ကိုယ်တော့်ကို ကျွန်ုပ်ချစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ယေရှု
(William Featherstone, ၁၈၄၂-၁၈၇၈ ရေးဖွဲ့သည့် ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ချစ် သည်။ )
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရေ… နောက်တစ်ပတ် စနေနေ့ဆိုရင် ညနေ ၅ နာရီအထိ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြရအောင်နော်။ သန့်ရှင်းသောဝညာဉ်တော်က အရာနှစ်ခုဖြစ်သည့် အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့် အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းအလို့ငှါ အပြစ်သားများကိုသူ့ထံသို့ အပြစ်သားများကိုဆွဲခေါ်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန် ဖြစ်သည်။ အာမင်……။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ယောဟန် ၁၆း၇-၁၄
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “သွေးတော်နှင့်ပြည့်သောစမ်း”
(William Cowper ၁၇၃၁-၁၈၀၀ ကရေးစပ်သည်။ )